မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း အပူပိုင်းဒေသ၏ ဇီဝရူပဆိုင်ရာအချက်အလက်များ
မြေမျက်နှာသွင်ပြင်၊ ရေဆင်း၊ ဘူမိဗေဒ
တည်နေရာ၊ အကျယ်အဝန်းနှင့် မြေအသုံးချမှုအခြေအနေ
ခရိုင် လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးများ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ
ပထမ (၄)နှစ် စီမံကိန်း (၁၉၉၇-၁၉၉၈ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၀၀-၂၀၀၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ)
နှစ်(၃၀) ဘက်စုံပင်မစီမံကိန်း (၂၀၀၁-၂၀၀၂) ဘဏ္ဍာနှစ်မှ (၂၀၃၀-၂၀၃၁) ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ
မြန်မာနိုင်ငံသစ်တောများပြန်လည်တည်ထောင်ရေးစီမံကိန်း-MRRP(၂၀၁၇-၂၀၁၈ မှ ၂၀၂၆-၂၇ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ)
အဓိက လုပ်ငန်းတာဝန်ကြီး (၄) ရပ်
သဘာဝတောကျန်များ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခြင်း (ထ)
ထင်းအစားအခြားလောင်စာ တိုးမြှင့်အသုံးချရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း (ထ)
ရေရရှိရေးအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်း (ရ)
အထူးစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း
Greening Complex Zone စီမံကိန်း
ဆောင်ရွက်ပြီး နိုင်ငံတကာစီမံကိန်း (Project) လုပ်ငန်းများ
ဆောင်ရွက်ဆဲ နိုင်ငံတကာစီမံကိန်း (Project) လုပ်ငန်းများ
ADB- GEF စီမံကိန်း
Climate Change Center (CCC) စီမံကိန်း
ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်း နှင့် မြေပုံများ
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး၊ ဌာနခွဲများနှင့် တိုင်းဒေသကြီး ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးများ
သယံဇာတနှင့်သဘာ၀ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန ဓာတ်ပုံ၏အကြောင်းအရာ သယံဇာတနှင့်သဘာ၀ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန ဓာတ်ပုံ၏အကြောင်းအရာ သယံဇာတနှင့်သဘာ၀ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန ဓာတ်ပုံ၏အကြောင်းအရာ သယံဇာတနှင့်သဘာ၀ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန ဓာတ်ပုံ၏အကြောင်းအရာ သယံဇာတနှင့်သဘာ၀ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန ဓာတ်ပုံ၏အကြောင်းအရာ သယံဇာတနှင့်သဘာ၀ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန ဓာတ်ပုံ၏အကြောင်းအရာ
အဓိကလုပ်ငန်းတာဝန်ကြီး (၄) ရပ်
သစ်တောစိုက်ခင်းများ တည်ထောင်ဆောင်ရွက်ခြင်း (စ)
အပူပိုင်းဒေသ စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး ဦးစီးဌာနသည် စိုက်ခင်းတည်ထောင်ခြင်း လုပ်ငန်းကို အပူပိုင်းမိုးနည်းရပ်ဝန်းဒေသနေ ပြည်သူလူထုအား ထင်းလောင်စာ၊ တိုင်၊ မျော၊ လယ်ယာသုံးကိရိယာများ ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်၊ ဆည်/ ကန်နှင့် မြစ်/ ချောင်းများ၏ ရေဝေရေလဲဒေသများထိန်းသိမ်းရန်၊ တောင်စဉ်တောင်တန်း များ စိမ်းလန်းစိုပြည်လာစေရန်၊ ဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး ….
အပူပိုင်းဒေသ စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး နယ်မြေရှိ သဘာဝတောများသည် သစ်တောထွက်ပစ္စည်း ထုတ်ယူသုံးစွဲမှု လွန်ကဲခြင်း၊ လူဦးရေ တိုးတက်မှုကြောင့် နေအိမ် အဆောက်အအုံများနှင့် စိုက်ပျိုးမြေများ တိုးချဲ့ခြင်းနှင့် မွေးမြူရေးအပူပိုင်းဒေသ စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး နယ်မြေရှိ သဘာဝတောများသည် သစ်တောထွက်ပစ္စည်း ထုတ်ယူသုံးစွဲမှု လွန်ကဲခြင်း၊ လူဦးရေ တိုးပွားလာသဖြင့် ….
ထင်းအစားအခြားလောင်စာ အသုံးချရေး လုပ်ငန်းများ တိုးချဲ့ခြင်း (ထ)
ထင်းအစား အခြားလောင်စာများနှင့် မီးဖိုအမျိုးမျိုး၊ အခြားစွမ်းအင် အမျိုးမျိုးကို တီထွင် ထုတ်လုပ် ရောင်းချဖြန့်ဖြူးကြရာတွင် အခြားစီးပွားရေး လုပ်ငန်းမှာကဲ့သို့ အမြတ်အစွန်းရရှိရေး တစ်ခုတည်းကိုသာ ဦးတည်ဆောင်ရွက်မှု မပြုဘဲ၊ အပူပိုင်းဒေသ စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး၊ သဘာဝ တောတောင် ရေမြေ ထိန်းသိမ်းရေး၊ ရာသီဥတု သင့်တင့်မျှတ၍လယ်ယာသီးနှံ အထွက်တိုးရေး အစရှိသည့် ….
ရေ ရရှိရေး အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်း (ရ)
ရေကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည့် သစ်ပင် သစ်တောများ ရှားပါးမှုကြောင့် ရွာသွန်းသည့် မိုးရေအများစုမှာ မြေအောက်တွင် စိမ့်ဝင် တည်နေနိုင်ခြင်း မရှိဘဲ အတားအဆီးမရှိ စီးဆင်း ပျောက်ကွယ်သွားသည့် အတွက် အပူပိုင်းဒေသများအတွင်း ရေရှားပါးသည့် အခြေအနေကို ကြုံတွေ့ကြရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်း အပူပိုင်းဒေသအတွင်း ….
ဆက်စပ်ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများ၏ Website Link များ
ပြည်​ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး၊ သယံဇာတနှင့်သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန
သစ်တော နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ်
မြန်မာ့ပုလဲထုတ်လုပ်​ရေး နှင့် ​ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း
မိုး​လေဝသ နှင့် ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
All Visitors – 2
Browser – Chrome 80.0.3987.92
အထူးစိမ်းလန်းစိုပြည်​ရေး စိုက်ပျိုးခြင်းလုပ်ငန်းအား နှစ်ရှည် ပြုစုပျိုးထောင်ထားရှိသည့် ကြံ့ခိုင်သန်စွမ်းသည့် ပျိုးပင်ကြီးများဖြင့် ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းအမျိုးအစားခေါင်းစဉ်များဖြင့် နှစ်စဉ် စီမံချက် များချမှတ်၍ စိုက်ပျိုး​ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည် ….
တောင်တန်းများ စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် တောင်စဉ်တောင်တန်းများ စိမ်းလန်းစိုပြည်လာစေရန် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမှ တောင်တန်း ၃ ခု၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမှ တောင်တန်း ၆ ခုနှင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှ တောင်တန်း ၈ ခု …..
ဗောဓိတထောင်နယ်မြေ စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးစီမံကိန်းဧရိယာသည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသ ကြီး၊ မုံရွာခရိုင်၊ မုံရွာမြို့နယ်၏ အရှေ့ဘက် (၁၂) မိုင်ခန့် အကွာတွင်တည်ရှိပြီး အကျယ်အဝန်းအားဖြင့် ဧရိယာ (၂၀၅၂၀) ဧက ရှိ၍ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် (၁၉၆၂) ပေ ရှိပါသည် ….
သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ လမ်းညွှန်ချက်အရ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ကျေးရွာ(၁)ရွာလျင် ဘက်စုံသုံးစိုက်ခင်း(၁) ဧက၊ တစ်အိမ်ထောင်လျှင် သစ်မာ (၂၀) ပင် …..
နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲနှင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ ဌာနအကြီးအမှူးတို့၏
လမ်းညွှန် ချက် အရ စိုက်ပျိုးခြင်းလုပ်ငန်းများ
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးခရိုင်၊ တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်ရှိ ဗိဿနိုးရှေးဟောင်းနယ် မြေအတွင်း အထူးစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးအတွက် သက်တမ်းရင့်ပျိုးပင်ကြီးများဖြင့် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာ ….
Asian Development Bank (ADB) နှင့် အပူပိုင်းဒေသ စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး ဦးစီးဌာနတို့ ပူးပေါင်း၍ “အလယ်ပိုင်းဒေသ အပူပိုင်းသစ်တောကြိုးဝိုင်းများ၏ ဂေဟစနစ်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ဒေသ တွင်း ကုန်ထုတ်လုပ်မှုများ မြှင့်တင်ရေးစီမံကိန်း …..
အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော လစာနှုန်းကျပ်(၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) တောအုပ်ကြီး (၁၆) နေရာအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်းနှင့် စာမေးပွဲဖြေဆိုရန် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်းအား အသိပေးကြော်ငြာခြင်း
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ တိုင်းဒေသကြီး တင်ဒါကော်မတီ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၊ အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ (အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း)
“အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ (Open Tender) ခေါ်ယူခြင်း”
“အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော လစာနှုန်း ကျပ် (၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) တောအုပ်ကြီး (၁၆) နေရာအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်းနှင့် စာမေးပွဲဖြေဆိုရန် အသိပေးကြော်ငြာခြင်း”
အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်း စိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးမြို့နယ်၊ သုခိတာလမ်းနှင့် သစ်တောလမ်းထောင့်ရှိ မြို့မပျိုးဥယျာဉ်တွင် (၇၅' x ၃၀' x ၂၅') RC (၂) ထပ် (၇၅' x ၃၀')+(၂၀' x ၁၀')+(၁၆' x ၁၆') x ၂၅' အရွယ်အအစားရှိ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး အဆောက်အဦ (၁) လုံး
“၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်၊ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲတွင် ထူးချွန်စွာအောင်မြင်ခဲ့ကြသော သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ထမ်းသားသမီးများအား ပညာရည်ချွန်ဆုချီးမြှင့်ပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပခြင်း”
“အပူပိုင်းဒေသ စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး ဦးစီးဌာန၊ စာရေးဝန်ထမ်းများ ရုံးလုပ်ငန်း ကျွမ်းကျင်မှု သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၅)၊ သင်တန်းဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပခြင်း”
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာန အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန e-Government လုပ်ငန်းများဆိုင်ရာ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ (Open Tender) ခေါ်ယူခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်း အပူပိုင်းဒေသ၏ ဇီဝရူပဆိုင်ရာအချက်အလက်များ
တည်နေရာ နှင့် အကျယ်အ၀န်း
စတင်ထုတ်လွှင့်သည့်နေ့ - ၁.၇.၂၀၁၃
This Website was developed by the financial support of Global Environment Facility (GEF) through the technical assistance project implemented by DZGD and ADB. Web Design by MWS